Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Madaxda Sare Iney Is Casilaan Wax Dhaama Ma Leh Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Madaxda Sare Iney Is Casilaan Wax Dhaama Ma Leh
Dal kasta marka ay la soo gudboonaato xaalad adag waxaa badbaadiya caqliga ay leeyihiin madaxda sare ee hogaamineysa dalka, waxeyna maskaxdooda la kaashadaan iney kala doortaan laba talo midood. Taas oo ah ama iney la yimaadaan waxqabad ay ku soo ceshadaan kalsoonida shacabkooda oo ay kasbadaan iney ka soo baxaan hogaanka amaanada loogu dhiibey talada dalka. Tan labeysa taladaas waa mida uu horay uga hadlay hogaamiyaha Daraawiishta oo laga soo xigtey inuu yiri”Adiguba Caqlaad leedahe Caliyow Carar Maxaa Dhaama?” Taas oo ah inuu Xilka isaga tago inta aysan ka raacin ceeb ka weyn mida uu hadda ku dhexjiro.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Hassan Sheekh Maxamud wuxuu ku guuldareystay hogaanka uu dalka u qabtay September 10, 2012. Ku dhowaad laba sanno dalka waxaa la soo gudboonaatey hogaanxumo dhan walba dowlada ka gelisey fashil iyo dhinac walba oo loo kufo in laga soo kici waayey. Madaxweynaha marka ay ku timaado hogaanxumo, waxaa eeda loo saariyaa in uu leeyahay lataliyeyaal xun oo la talintiisa mariin habaabiyey. Shacabka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan marar badan waxey u soo jeediyeen inuu bedelo horjoogayaasha tirada yar oo sida kelitalisnimada leh keligood isugu koobay talada madaxtooyada. Mudane Xassan waa ka dhego adeygay codka ku saleysan rabitaanka shacabka oo ay uga dalbanayeen inuu isbedel ku sameeyo sartu meesha ay ka quruntay. Wuxuu ka ilduufay siyaasadu ineysan lahayn saaxiibtinimo joogta ah, laakiin ay leedahay dano joogto ah oo u baahan in la socodsiiyo, taas oo loo baahan yahay iney ka madaxbanaanaato saaxiibtinimo ku saleysan ganacsi iyo ehelnimo. Maanta oo laga quustay hogaankiisa rajada laga qabo, waxba sooma kordhineyso isbedel lagu sameeyo shaqsiyaad gaara, waayo waa la soo dhaafay xiligii ay ku habooneyd isbedelkaas, waxaana maanta taagan khasaarooyin waaweyn oo aad u dhaawacay kalsoonida shacabka iyo mida caalamka. Xisbiga Dadka wuxuu u soo jeedinayaa Madaxweyne Hassan inuu is casilo si looga nabadgalo dhibaato intaan ka murugo badan oo ka dhalata hogaanxumadiisa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan wuxuu si qaldan ula mariin habaabay hogaanka Golaha Shacabka oo loo doortay August 2012. Shacabka Soomaaliyeed waxey cod dheer ugu muujiyeen dareenkooda ku saleysan walaaca ay ka qabaan xadgudubyada ay howlwadeenada dowlada kula kacayaan shacabka aan hubeysneyn iyo dowlada oo ku fashilantay iney shacabka soo gaarsiiso adeegyada dowlada ay ka sugayeen. Mudane Jawaari waxaa loo soo jeediyey inuu wax ka qabto dhaqanxumada baarlamaanka oo noqday suuq lagu kala gato codka, waxaa kaloo loo soo jeediyey in baarlamaanka ay dowlada kala xisaabtamaan waxqabad la’aanta iyo musuqa baahsan ee ka dhexjira hayadaha dowlada. Taladaas bedelkeeda gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu doorbiday oo uu xildhibaanada u horseeday inuu isku dhexmilo baarlamaanka iyo madaxtooyada si ay meesha uga baxdo la xisaabtanka dowlada. Baarlamaanada caalamka inta badan waxey jiraan wakhti dhan laba sanno, wixii markaas ka dambeeyana waxaa yimaada hogaan cusub oo xaaladaha cakiran talo wanaagsan wax uga bedela. Mudane Jawaari waa masuulka ugu daran ee sabab u ah iney fashilanto dowlada Soomaaliya, waayo waa hayadiisa mida looga baahan yahay iney saxdo khaladaadka dowlada oo sida uu sharcigu qabo kalsoonida kala laabata howlwadeenada ay hayadahooda ka jirto musuqa iyo waxqabad la’aanta. Waxaa la soo gaaray wakhtiga uu Gudoomiye Jawaari aqbali lahaa guuldaradiisa oo uu xilka iska casili lahaa inta aysan ku imaan duruufo keeni karta in lagu soo oogo dembiyo qaran.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Mudane C/weli Sheekh Axmed waxey dadaaladiisu noqdeen kuwo aan waxba soo kordhin. Inkasta oo uu yahay nin muujiyey inuu dadaalayo, dhaqan siyaasadeed oo dabeecad wanaagsana uu ku wadey hanaanka dowlada mudada yar ee uu xilka hayey, haddana shacabka uma muuqato in dadaalkiisu uu wax weyn ka bedeli karo hogaanxumada madaxda sare iyo madaxbanaani la’aanta ay dowladu ku fulin waysey howlaheeda. Waxaa ra’isulwasaaraha lagala taliyey shaqsiyaadka ay diideen shacabka Soomaaliyeed ineysan ka mid noqon dowladiisa, taasna wuxuu ka doorbiday inuu qanciyo rabitaanka madaxweynaha isaga oo ay u muuqato in siyaasadu la cayn wareegtey madaxweynaha. Mudane C/weli wuxuu baal maray rabitaanka shacabka, dadaalka u qorsheysan ee uu damacsanaa inuu hiigsado waxaa xanibey caqabadaha dumiyey dowlada tiisa ka horeysey. Dabinka uu maanta ku jiro ra’isul wasaaraha waa mid uu isagu ogaal ahaan isu geliyey qoolka. Maanta waxaa la soo gaarey wakhtiga ay mudan tahay inuu qirto fashilka dowladiisa iney ka weyn tahay iscasilaada shaqsiyaad gaara, eeda ugu weyna uu isagu iska leeyahay, loona baahan yahay xukuumada uu horkacayo iney meesha ka baxdo. Waxaan shaki lahayn qof iyo laba is casisha oo ka mida dowlada ineysan xaalada murugsan aysan waxba ka bedeleyn, loona baahan yahay runta in si geesinimo leh loo qaato. Xisbiga Dadka wuxuu u soo jeedinayaa ra’sul wasaaraha inuu xilka isaga tago oo uu kala diro xubnaha golahiisa oo aan wax rajo ah laga qabin iney wakhti dhow iyo mid dheer midna in laga helo waxqabad loo aayo.
Madaxda sare ee dowlada waxey guud ahaan ku guuldareysteen iney la yimaadaan hogaan madaxbanaan oo ay ku howl geliyaan ismaamulka dowladnimada Soomaaliyeed. Hogaanxumadaas waxey maanta keentay in dowlada Soomaaliyeed laba sanno kadib ay ku jirto xaalad aad u liidata oo khatara. Inta aysan dalka ka dhicin masiibooyin waaweyn oo dad badan ay ku le’daan, waxaa haboon in madaxda sare ay mudnaanta siiyaan maslaxada dalka sida ay ku jirto oo ah iney xilalka isaga degaan si fursad loogu helo isbedel dhaba oo soo celiya rajada ka dhuntay shacabka Soomaaliyeed. Haddii taas la waayo waxaa la arki doonaa maanta maalin ay ka liitaan oo loo haysto eedeymo ku saabsan dembiyo qaran iyo iyaga oo si qasaba xilka looga xayuubiyo, dabadeedna maxkamad lagu soo taago dembiyada ay ka galeen shacabka Soomaaliyeed.
DAAWO: Munaasabada caleemo sarka boqorka Daarood Oo Hada Si Toos Ah Ugu Socota Degmada Qardho
R/Wasaare Cabdiwali Oo Aqbalay Iscasilaadii Wasiirka Amniga Qaranka C/Kariin Xuseem Guuleed